Qalitaanka Cypionate (Cypionate test) (58-20-8) hplc = 99% | AASraw
/ Products / Anterolics steroids / Taxanaha budada ah ee testosterone / Testosterone Cypionate (Cypionate test) budada
SKU: 58-20-8. Categories: Taxanaha budada ah ee testosterone, Anterolics steroids
AASraw wuxuu ku jiraa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qiyaas ah oo ah baaritaanka testosterone Cypionate (Cypum test) (58-20-8), iyada oo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Dib u eegida (2)
Testosterone Cypionate (Cyping test) video budada ah
Testosterone Cypionate Root (Cyping test) Calaamadaha asaasiga ah
Name: Testosterone Cypionate (Cypionate test)
Formula kelli: C27H40O3
Miisaankani waa: 412.6
Dhibcaha Biyaha: 98 - 104ºC
Qalabka tijaabada ah ee loo yaqaan 'Cypionate Root' (Cypionate test) Cabbiraadda Isticmaalka wareegga steroids
Testosterone Cypionate sida caadiga ah waxaa loogu yeeraa "Test Cyp", Cypionate, Depo-Testosterone, ay sameeyaan kuwa jidhka qaada ama kuwa leh UGL.
Isticmaalka budada loo yaqaan 'Cypionate Pear Trout'
Testosterone Cypionate (Cipionate test) budada ayaa badiyaa loo isticmaalaa saliid la isku duro. Suuqa, waxaa jira 200mg / ml, 250mg / ml, 300mg / ml, qaar ka mid ah UGL ayaa xitaa dhigay 350mg / ml iyo 400mg / ml. Laakiin, waxay noqon doontaa mid aad u xoog badan
Digniin ku saabsan baaritaanka Root Testone Cypionate
Sida hormoonka aadka loo daaweeyo ee loogu talagalay ragga badankooda, saameynta daawada Costerionone Testitiveone Cipionate way siyaabo badan u sahlanaan kartaa in la xakameeyo. Marka ay timaado dareen-celinnada noocaas ah, maskaxda ku hayaan waxay inta badan ku dhacaan dhulka dhabta ah ee suurtogalka ah, mana aha wax la hubo. Xitaa markaa, wadarta qiyaasta, saadaalinta hidaha iyo xaaladdaada guud ee caafimaadka ayaa door ka ciyaari doonta.
Cabbirada budada la baaro
Testosterone Cypionate waxay kor u qaadi kartaa dihydrototestosterone (DHT) saameynaha la xidhiidha sida finanka, timo lumis iyo xoojin qanjirka 'prostate'; Si kastaba ha ahaatee, waa inay tagtaa iyada oo aan dhihin DHT steroids waxay noqon doontaa khaa'imiinta culus. Si loo ilaaliyo ilaalinta, 5-alpha reductase inhibitor sida Finasteride waxay noqon kartaa mid waxtar leh maadaama ay tahay xakameyn xannibaad iyo xajmiga DHT ayaa keeneysa dhibaatada. Waa in la xusuusto; timo lumis ayaa suurtogal ah in ragga ay u suuro gasho in ay u egtahay xayawaanka.
Soodhawaynta Badeecada Biyaha Caarada
Sida loo soo iibsado tijaabo ka sameysan kiniiniga Cypionate from AASraw
AASRAW Ciyaartoyda badan waxay muujiyaan faa'iido xoog leh iyagoo isticmaalaya tijaabada Testosterone Cypionate ee tababarka.
Iskuday alwaax qafiif ah
2 dib loogu talagalay Testosterone Cypionate (Cypionate Test) budada
aasaas - 05 / 16 / 2019
Testosterone Cypionate (Cypionate test) waa budada